सप्तकोसीमा मोटरबोट सररर…. पर्यटक बढे। – Rastriyapatrika
सप्तकोसीमा मोटरबोट सररर…. पर्यटक बढे।
गाईघाट : सप्तकोसी नदीमा जेटबोट सञ्चालन भएपछि आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।
धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको वरहाक्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र मैनामैनी, कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र हेर्न आउनेको संख्या बढेको हो । मन्दिरको दर्शन गर्न पाइने, प्राकृतिक दृश्यहरुको अवलोकन र जलयात्राको पनि अनुभव गर्न पाइने भएपछि आन्तरिक र वाह्य पर्यटकको संख्या बढेको छ ।
पर्यटनलाई मध्यनजर गरेर बेलका नगरपालिकाले वडा नम्बर ७ लाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न महोत्सव समेत आयोजना गरेको छ ।
नियमित यातायात साधन
उदयपुर र सुनसरीको सीमा भएर बग्ने सप्तकोसी नदीमा सञ्चालनमा ल्याइएको जेटबोटबाट धनकुटा र भोजपुर जिल्लाका सीमास्थलसम्म पुगिन्छ । जेटबोट सञ्चालनसँगै कोसी नजिक बसेका सर्वसाधरणले समेत यसैलाई नियमित यातायातको साधन बनाएका छन् ।
दुःखले बनाइएका सडकमा यातायातका साधन सञ्चालनमा नआएपछि उनीहरु जेटबोट मार्फत दैनिक रुपमा आवतजावत गर्छन् । सडकको बाटोबाट समय पनि धेरै लाग्ने र इन्धन पनि बढी खर्च हुने भएपछि भोजपुरको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा मोटरसाइकल खरिद गरेका अधिकांश सर्वसाधरण समेत जेटबोट नै रोज्छन् ।
कोही त जेटबोटबाट मोटरसाइकल बोकाएर पनि जाने गर्छन् । जेटबोटमा मोटरसाइकल तार्दै गरेका तेजेन्द्र राईले भने, ‘बिराटनगरबाट आएको गाडीको बाटोबाट जाँदा सुनसरी, धनकुटा हुँदै घर पुग्दा झण्डै १ हजारको तेल खर्च हुने रहेछ, जेटबोटबाट जाँदा आउन जान ७ सयले पुग्छ ।’
जल यातायात मार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उदयपुरको बेलका र सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा जेटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको हो । अघिल्लो वर्षबाट सुरु भएको जेटबोट करिव चार महिना वर्षात्को समयमा रोकिएको र अहिले नदीमा जलप्रवाह घटेकोले कात्तिक महिनादेखि पुनः संचालन गरिएको बेलका नगरपालिकाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए ।
स्थानीयका अनुसार अचेल दैनिक करिव एक हजार भन्दा बढीको संख्यामा मानिस जेटबोटबाटै आवतजावत गर्छन् । अरुण, तमोर र दुधकोसीको संगम त्रिवेणीको मनोरम प्राकृति छहराको दुश्यावलोकन गर्न जलयातायात मार्फत घुम्ने पर्यटकको संख्या दिनहुँ बढिरहेको बेलका नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र राईले बताए ।
द्रूत तर महंगो
यसरी जल यातायात गराउँदै आएका सप्तकोसीमा दुई वटा जेटबोट छन् । उदयपुर, सुनसरी, धनकुटा हुँदै भोजपुरको त्रिवेणीस्थल सिम्लेसम्मको १६ किलोमिटर जलयातायात संचालन हुँदै आएको हो ।
झण्डै २० मिनेटको यात्रा हुने एक जेटबोट सामान्यतः २० जना क्षमताको छ । अन्य सवारी साधनबाट ४५ मिनेटको समय लाग्ने चतारा बराहाक्षेत्रसम्मको यात्रामा जेटबोटबाट ३ मिनेट २५ सेकेण्डमा पुग्न सकिन्छ ।
सेवा छिटो भए पनि भाडादर भने निकै महंगो भएको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले भाडादरलाई पुर्नविचार गर्नु पर्ने माग गरेका छन् । साथै सरकारले सप्तकोसी नदीमाका बीचमा रहेका ठूला ढुंगा पंन्छाएर बाटो खोलिदिएको खण्डमा एक घन्टामै तुम्लिङटार र दुई घण्टामा दोलालघाटसम्म सहजै पुग्न सकिने स्थानीयको बुझाइ छ ।
व्यावसायिक रुपले सप्तकोसी नदीमा पहिलो पटक सञ्चलनमा ल्याइएको जेट चढ्न उल्लेख्य रुपमा यात्रु आउने गरेको र यसबाट दैनिक १० हजारसम्म आम्दानी हुने गरेको बताइन्छ ।